(၁၈)နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးကို ကိုယ်ဝန်(၃)လရသည်အထိအကြိမ်ကြိမ်အဓမ္မပြုကျင့်မှု - Uptodate MM
Uptodate MM | April 14, 2019 | ကျန်းမာရေး | No Comments
ငါ့ . ရည်ကိုအပြင်ထုတ်ပစ်တာဟုပြောပြီးကိုယ်ဝန်(၃)လရသည်အထိအကြိမ်ကြိမ်အဓမ္မပြုကျင့်မှု
(၇-၄-၂၀၁၉)ရက်နေ့(၈:၀၀)နာရီ အချိန်ခန့်ကျောက်တံခါးမြို့ ကွင်းမြောက်ရပ်ကွက်နှင်းဆီလမ်းနေသူ ဦးထွန်းဝေ(ဘ)ဦးကျော်စိန်(၅၈)နှစ်မှတစ်ရပ်ကွက်တည်းနေသူအိမ်ချင်းကပ်လျက်မ×××××××(ဘ)ဦးဇော်မိုး(၁၈)နှစ်အားကာမ ရာဂစိတ်အား ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်သတ်ပစ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုကာ
အလိုမတူပဲကိုယ်ဝန်(၃)လ ရသည်အထိ အကြိမ်ကြိမ်အဓမ္မ ပြုကျင့်ခဲ့ပါသောကြောင့် ကျောက်တံခါးမြို့မရဲစခန်းတွင် အဒေါ်ဖြစ်သူနှင့် အစ်ကိုဖြစ်သူတို့နှင့်အတူမxxxxxမှ အမှုဖွင့်တိုင်ကြားခဲ့ပါသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ မ×××××သည် လွန်ခဲ့သော၁၉၉၉ခုနှစ်ခန့်မှစ၍အတူနေ အမဖြစ်သူ မယမင်းဇော်မိုးနှင့်အတူခြံခြင်း ကပ်လျက်နေ ဦးထွန်းဝေပိုင်ဆိုင်သောရွှေလဝန်း အထည်ဆိုင်တွင် အလုပ်လုပ်ကာဈေးသိမ်းပြီးနောက် ဦးထွန်းဝေ၏ နေအိမ်တွင် အိမ်အကူလုပ်ငန်းအားည(၉:၀၀)နာရီ အချိန်ထိ အလုပ် လုပ်ကိုင်ရပြီးခြံခြင်းကပ်လျက် ၎င်း၏ နေအိမ်သို့ ပြန်လည် အိပ်စက်ခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့ လုပ်ကိုင်နေစဉ် ($-၁၂-၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင်ဦးထွန်းဝေ၏ အတူနေ ဇနီးဖြစ်သူ မခင်မူအေးနှင့်မယမင်းဇော်မိုးတို့မှာ ရန်ကုန်သို့ဈေးဝယ်ရန်သွားရောက်ပြီးဦးထွန်းဝေ၏အတူနေသားဖြစ်သူရာဇာလဝန်း(ခ)အောင်ခန့်ပိုင်(ခ)ရွှေလဝန်းမှာကားအော်ဒါလိုက်ပါသွားသဖြင့် နေအိမ်တွင်ဦးထွန်းဝေနှင့်မxxxxxxတို့ နှစ်ဦးသာကျန်ရှိချိန် ည(၆:၀၀)နာရီ အချိန်ခန့် မxxxxxမှမီးပူတိုက်နေစဉ် ဦးထွန်းဝေ ရောက်ရှိလာပြီး…
မxxxxxာ်အား လက်ကိုဆွဲ၍ နေအိမ်နောက်ဖေးရှိ အဝတ်လျှော်စက်ရှေ့ အရောက်တွင်အလိုမတူပဲ သားမယားအဖြစ်(၅)မိနစ်ခန့် အလိုမတူပဲ သား မယားအဖြစ်တစ်ကြိမ် ပြုကျင့်ခဲ့ပြီးဦးထွန်းဝေမှ “နင် ဘာမှမဖြစ်ဘူး” ငါ သုတ်ရည်ကိုအပြင်ထုတ်ပစ်တာဟုပြောဆိုပြီးအဆိုပါကိစ္စအား ဘယ်သူ့မှ မပြောရန်ပြောရင် သတ်ပစ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုသောကြောင့် မ××××မှမည်သူ့ကိုမှ မပြောပဲနေခဲ့ပါသည်။
နောက်(၇)ရက်ခန့်အကြာ ဦးထွန်းဝေ၏ နေအိမ်တွင်မ×××××နှင့် နှစ်ဦးတည်းရှိနေစဉ်နေအိမ်ရှေ့ခန်းတွင် သားမယားအဖြစ် (၂)ကြိမ်ခန့်ပြုကျင့်ပြီး နောက် (၂)ရက်အကြာတွင်အိမ်ရှေ့ ဧည့်ခန်းတွင် တစ်ကြိမ် အလိုမတူပဲသားမယားအဖြစ် ပြုကျင့်ခဲ့ပါသည်။
(၃၀-၃-၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင်မ×××××မှမိန်းမရာသီမလာကြောင်း အဒေါ်ဖြစ်သူ ဒေါ်စန်းဌေးအားပြောပြသဖြင့် စစ်ဆေးရာ ကိုယ်ဝန်(၃)လ ရှိကြောင်း၎င်း ကိုယ်ဝန်အား ဦးထွန်းဝေဖြင့်ရ ရှိကြောင်းပြောပြသဖြင့် ဒေါ်စန်းဌေးနှင့်အစ်ကိုဖြစ်သူခိုင်မင်းသူတို့မှကျောက်တံခါးမြို့မ ရဲစခန်းသို့ခေါ်ဆောက်လာပြီးခြိမ်းခြောက်ပြောဆို အလိုမတူပဲ သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်သူ ဦးထွန်းဝေအား ဥပဒေအရအရေးယူပေးပါရန် မ××××မှတိုင်ကြားခဲ့ပါသည်။
အမှုအား ကျောက်တံခါးမြို့မ ရဲစခန်း( ပ)၂၉၂/၂၀၁၉ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၇၆ အရ ရဲ၅၆၃၅ ဒုရဲမှူးဇော်ထွန်း(စခန်းမှူး)မှ စစ်ဆေးလျက်ရှိပြီး ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအားအမြန်ဆုံး ဖမ်းဆီးနိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ကိုသက် ကျောက်တံခါး
ငါ့ . ရညျကိုအပွငျထုတျပဈတာဟုပွောပွီးကိုယျဝနျ(၃)လရသညျအထိအကွိမျကွိမျအဓမ်မပွုကငျြ့မှု
(၇-၄-၂၀၁၉)ရကျနေ့(၈:၀၀)နာရီ အခြိနျခနျ့ကြောကျတံခါးမွို့ ကှငျးမွောကျရပျကှကျနှငျးဆီလမျးနသေူ ဦးထှနျးဝေ(ဘ)ဦးကြျောစိနျ(၅၈)နှဈမှတဈရပျကှကျတညျးနသေူအိမျခငျြးကပျလကျြမ×××××××(ဘ)ဦးဇျောမိုး(၁၈)နှဈအားကာမ ရာဂစိတျအား ထိနျးခြုပျနိုငျခွငျးမရှိသောကွောငျ့သတျပဈမညျဟု ခွိမျးခွောကျပွောဆိုကာ
အလိုမတူပဲကိုယျဝနျ(၃)လ ရသညျအထိ အကွိမျကွိမျအဓမ်မ ပွုကငျြ့ခဲ့ပါသောကွောငျ့ ကြောကျတံခါးမွို့မရဲစခနျးတှငျ အဒျေါဖွဈသူနှငျ့ အဈကိုဖွဈသူတို့နှငျ့အတူမxxxxxမှ အမှုဖှငျ့တိုငျကွားခဲ့ပါသညျ။
ဖွဈစဉျမှာ မ×××××သညျ လှနျခဲ့သော၁၉၉၉ခုနှဈခနျ့မှစ၍အတူနေ အမဖွဈသူ မယမငျးဇျောမိုးနှငျ့အတူခွံခွငျး ကပျလကျြနေ ဦးထှနျးဝပေိုငျဆိုငျသောရှလေဝနျး အထညျဆိုငျတှငျ အလုပျလုပျကာစြေးသိမျးပွီးနောကျ ဦးထှနျးဝေ၏ နအေိမျတှငျ အိမျအကူလုပျငနျးအားည(၉:၀၀)နာရီ အခြိနျထိ အလုပျ လုပျကိုငျရပွီးခွံခွငျးကပျလကျြ ၎င်းငျး၏ နအေိမျသို့ ပွနျလညျ အိပျစကျခဲ့ပါသညျ။
ထိုသို့ လုပျကိုငျနစေဉျ ($-၁၂-၂၀၁၈)ရကျနတှေ့ငျဦးထှနျးဝေ၏ အတူနေ ဇနီးဖွဈသူ မခငျမူအေးနှငျ့မယမငျးဇျောမိုးတို့မှာ ရနျကုနျသို့စြေးဝယျရနျသှားရောကျပွီးဦးထှနျးဝေ၏အတူနသေားဖွဈသူရာဇာလဝနျး(ခ)အောငျခနျ့ပိုငျ(ခ)ရှလေဝနျးမှာကားအျောဒါလိုကျပါသှားသဖွငျ့ နအေိမျတှငျဦးထှနျးဝနှေငျ့မxxxxxxတို့ နှဈဦးသာကနျြရှိခြိနျ ည(၆:၀၀)နာရီ အခြိနျခနျ့ မxxxxxမှမီးပူတိုကျနစေဉျ ဦးထှနျးဝေ ရောကျရှိလာပွီး
မxxxxxျာအား လကျကိုဆှဲ၍ နအေိမျနောကျဖေးရှိ အဝတျလြှျောစကျရှေ့ အရောကျတှငျအလိုမတူပဲ သားမယားအဖွဈ(၅)မိနဈခနျ့ အလိုမတူပဲ သား မယားအဖွဈတဈကွိမျ ပွုကငျြ့ခဲ့ပွီးဦးထှနျးဝမှေ “နငျ ဘာမှမဖွဈဘူး” ငါ သုတျရညျကိုအပွငျထုတျပဈတာဟုပွောဆိုပွီးအဆိုပါကိစ်စအား ဘယျသူ့မှ မပွောရနျပွောရငျ သတျပဈမညျဟု ခွိမျးခွောကျပွောဆိုသောကွောငျ့ မ××××မှမညျသူ့ကိုမှ မပွောပဲနခေဲ့ပါသညျ။
နောကျ(၇)ရကျခနျ့အကွာ ဦးထှနျးဝေ၏ နအေိမျတှငျမ×××××နှငျ့ နှဈဦးတညျးရှိနစေဉျနအေိမျရှခေ့နျးတှငျ သားမယားအဖွဈ (၂)ကွိမျခနျ့ပွုကငျြ့ပွီး နောကျ (၂)ရကျအကွာတှငျအိမျရှေ့ ဧညျ့ခနျးတှငျ တဈကွိမျ အလိုမတူပဲသားမယားအဖွဈ ပွုကငျြ့ခဲ့ပါသညျ။
(၃၀-၃-၂၀၁၉)ရကျနတှေ့ငျမ×××××မှမိနျးမရာသီမလာကွောငျး အဒျေါဖွဈသူ ဒျေါစနျးဌေးအားပွောပွသဖွငျ့ စဈဆေးရာ ကိုယျဝနျ(၃)လ ရှိကွောငျး၎င်းငျး ကိုယျဝနျအား ဦးထှနျးဝဖွေငျ့ရ ရှိကွောငျးပွောပွသဖွငျ့ ဒျေါစနျးဌေးနှငျ့အဈကိုဖွဈသူခိုငျမငျးသူတို့မှကြောကျတံခါးမွို့မ ရဲစခနျးသို့ချေါဆောကျလာပွီးခွိမျးခွောကျပွောဆို အလိုမတူပဲ သားမယားအဖွဈပွုကငျြ့သူ ဦးထှနျးဝအေား ဥပဒအေရအရေးယူပေးပါရနျ မ××××မှတိုငျကွားခဲ့ပါသညျ။
အမှုအား ကြောကျတံခါးမွို့မ ရဲစခနျး( ပ)၂၉၂/၂၀၁၉ရာဇသတျကွီးပုဒျမ ၃၇၆ အရ ရဲ၅၆၃၅ ဒုရဲမှူးဇျောထှနျး(စခနျးမှူး)မှ စဈဆေးလကျြရှိပွီး ပွဈမှုကြူးလှနျသူအားအမွနျဆုံး ဖမျးဆီးနိုငျရေး စီစဉျဆောငျရှကျလကျြရှိပါသညျ။ကိုသကျ ကြောကျတံခါး
အာသီးရောင်ပြီး လည်ချောင်းနာ တဲ့ သူေ တွ အ တွက် နာရီပိုင်း အ တွင်း မှာ ပျောက် ကင်းေ စ မည့် သ ဘာ ဝ ဆေး နည်း
မြွေ ဆိ ပ်ပြေ နိုင် တဲ့ အ ဆိ ပ်ပြေ ပင်
ဘက်တီ ရီးယား နဲ့ ဗိုင်းရပ် စ်တွေ ကို တိုက် ခိုက် နိုင် စွမ်း ရှိ တဲ့ ကိုယ် ခံ အား ကော င်းစေ တဲ့အစား စာ (၁၁) မျိုး